Selivuke Kwatshu Na Iqembu leDynamos?
Nkwenkwezi 04, 2018
Tsholotsho FC vs. Dynamos
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngeSonto ukuba iqembu leDynamos lingabe selivuke khwatshu yini kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu leDynamos selinqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo eyisikhombisa eliyidlale ekuqaleni kwesizini njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwala belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima.
Umlandeli weqembu leDeMbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leliqembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngeSonto lapho elizadlala khona lele Harare City ukuba selivuke khwatshu na.
“Njengomlandeli weqembu leDynamos ngibona angathi iqembu selivukile kodwa iqiniso lakho lokhu lizabonakala ngeSonto lapho elizahlangana khona lele Harare City ngoba lumdlalo ngowamaqembu amabili aphuma edolobheni linye okungumdlalo ongekho lula.”
Imidlalo ye Castle Premier Soccer League eyeviki letshumi iqala kusasa ngoMgqibelo lapho iqembu leHerentals elizemukela khona ele FC Platinum enkundleni ye Rufaro, iqembu leNichrut lizadibana lele Chapungu enkundleni ye Ascot, iqembu le Chicken Inn lizangqikilana lele Bulawayo City ngase Luveve kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Yadah ngase Baobab.
Kweminye imidlalo yangeSonto iqembu leHighlanders lizadlala lele ZPC Kariba enkundleni ye Barbourfields, iqembu leShabanie Mine lizadibana lele CAPS United ngase Maglas, iqembu le Triangle lizadlala lele Bulawayo Chiefs kuthi iqembu le Mutare City Rovers lizadibana lele Black Rhinos ngase Vengere.